Toerana kanto sady tranainy no maoderina, mandova ny hakanton'ny atsinanana｜Millo Reflections - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Sehatra kanto izay sady taloha no maoderina, mandova ny hakanton'ny atsinanana ｜ fisaintsainana Millo
2021 / 08 / 08 FisokajianaInterior design 4133 0
Ity tranga ity dia mialoha ny sary iray amin'ny folo hosodoko sinoa malaza indrindra, "A Miles Rivers and Mountains" iray alina "nataon'i Wang Ximeng avy amin'ny Dynasty Song Northern. Ao amin'ny sary hosodoko, malalaka ny ony, mihetsiketsika ny tendrombohitra, ny tanàna fanjonoana, ny pavilion, ny trano matevina ary ny tetezana lava. Izy rehetra dia feno pitsopitsony sy fiainana, ka mandrafitra ny sary mahafinaritra an'i Jiangnan. Noho izany, dia avadintsika ho lasa tsipika mampientanentana amin'ny habakabaka ny lalan-drantsika amin'ireo sary hosodoko. Tao afovoan-tanàna, dia nandoko tontolo voajanahary misy olombelona an'arivony taona ho lasa any aoriana isika. Io dia ahafahan'ny olona mandehandeha ao anaty sahirana ao an-tanàna hilentika ao anaty rivo-piainana kanto sy taloha nefa tsy very maoderina sy be pitsiny hatramin'ny dingana voalohany hiditra ao. Manome ny olona fahatsapana ny maha-izy azy raha ny fahitana azy voalohany. Manindrona ny fijerin'ny olombelona sy ny zavakanto ao anaty mba hamoronana toerana iray iaraha-miaina ny fiainana sy ny estetika.
Ny famolavolana anatiny ankehitriny dia tsy mila mifantoka amin'ny famahana ny filàna ilaina toy ny sensory sy ny traikefa fotsiny, fa koa manana ny iraka handova ny kolontsaina sy hampita ny fotoana. Ny kolontsaina taloha, ny fikatsahana ara-panahy ny literatiora ary ny estetika nentin-drazana sinoa dia niray hina mba hamorona toerana misy ny symbiotika sy kanto izay sady taloha no maoderina.
Miaraka amin'ny daroka famolavolana ankehitriny, ny mpamorona dia mamoaka ny endrika kanto abstract an'ny ranomainty atsinanana ary manasa mba hamolavolana toerana kanto izay mifangaro amin'ny dikany ara-kolotsaina amin'ny fahalianana ankehitriny. Ny rindrina ambadika tsotra dia voaravaka ranomainty sy horonan-taratasy. Ny marina, maivana, mainty sy fotsy dia mety, maharitra maitso kely. Ny fahanginana sy ny fitsirihana ny atsinanana ary ny hatsarana sy famirapiratan'ny ankehitriny dia mifangaro mirindra ho iray.
Ny faritry ny boaty fasika dia manana lamina misokatra. Ny endrika andohalambo misy ny lela sy ny otely eo amin'ny tampon'ny tampony dia mampanako ny voninkazo am-baravarankely sinoa, manome ny hatsaran-tarehy estetika atsinanana ankehitriny.
Ny "Renirano sy tendrombohitra an'arivony" dia voahodidin'ny tendrombohitra eny amin'ny lanitra, taratra ny mazava sy ny aloka. Lava ny gadona ary lava ny dikany.
Milamina sy kanto ny faritra fifampiraharahana, manohy ny soratra tatsinanana. Mamolavola ny kolontsaina sy ny fanahy sinoa nentin-drazana miaraka amina fiteny famoronana maoderina ilay mpamorona. Ny fandaminana ny artifact, ny fizarazaran'ireo fitaovana, ny fampisehoana endrika sy firafitra. Ny antsipiriany rehetra dia milaza ny dikan'ny kolontsaina sinoa.
Ny habaka dia toradroa sy milamina, tsotra ary atmosfera. Ny hatsarana atsinanana manankarena dia naseho tamin'ity fotoana ity. Ny fampidirana ireo singa metaly dia manome ny habaka hatsaran-tarehy maoderina sy kanto kokoa, miloko nefa tsy masiaka, tsy misy soritra maneho ny endriny. Izy io dia misintona ny estetika hiverina amin'ny toetr'andro ankehitriny ary manala ny toetr'andro.
Ny tendrombohitra sy ny ony dia mivelatra amin'ny hazavana sy ny aloka, toy ny tena izy sy virtoaly, manana fikasana henjana sy feno gadona. Izy io dia mahatonga ny fahatsapana ho maso hirindra kokoa ary mitondra fahatsarana kanto sy fomba fijery.
Izy io dia mamorona atmosfera an-habakabaka izay sady taloha no maoderina, mamorona fanandramana mahatsapa lalina. Ao amin'ny habaka maha-olombelona tatsinanana tatsinanana dia afaka mandositra ny glamor ianao, miala amin'ny korontana ary manadio ny sainao. Azonao atao ny mahatsapa ny fihetseham-po ampitaina amin'ny habakabaka, mahatsapa ny fitoniana amin'izao fotoana izao, ary mampiseho ny toetra maha-olona avy any atsinanana milamina sy milamina.
Mamirapiratra eo anelanelan'ny kesika ny volana mamirapiratra, ary mikoriana amin'ny vato ny lohataona mazava. Ao amin'ny famolavolana ny fisotroana dite, ny mpamorona dia mivoatra ireo singa amin'ny ranomainty sy ny tontolon'ny alàlan'ny fandokoana ara-javakanto sy an-tsokosoko ary sary an-tsaina mamorona, mamadika ny pitsiny ho tsotra. Izy io dia miteraka fitokanana tatsinanana kanto sy milamina, manome ny olona "fahanginana" sy "fahadiovana". Misy haingo an-tendrombohitra sy vato tsotra sy mangarahara, famolavolana tranga taloha sy kanto. Ny ranomainty sy ny rano mivezivezy ao amin'ny habakabaky ny habakabaka. Ny tena izy sy ny sary an-tsaina dia mifanaraka amin'ny tsirairay, ary ny fanahy Zen dia be dia be.
Ny habaka dia manankarena amin'ny antsipiriany sy mendri-kaja amin'ny atmosfera. Fomba manintona ny fomban'ny sinoa. Ny toerana tsirairay dia mitazona ny fifandraisana, nefa koa manome fahaleovan-tena samihafa sy fiainana manokana miaraka amin'ny gadona spatial iray ihany. Manintona ny sehatra amin'ny fahanginana izy, mampiseho ny fandehanan'ny toetr'andro. Izy io dia faritra atsinanana misy kalitao lehibe. Io dia ahafahan'ny mpanjifa miaina fihetseham-po isan-karazany amin'ny habaka ary manome fitohizana sy fahasamihafana bebe kokoa amin'ilay habaka.
Pinina sy plum, volotsangana, lalana telo fa misy sakafo mahavelona. Sarotra ny hamitaka ny fanala sy ny lanezy raha tsy mihantitra amin'ny fahamainana ianao.
–Wang Mingsui (Hira)
Ny mpamorona dia nanisy marika atsinanana matanjaka eo amin'ny habakabaka. Ireo sakaiza telo taona, plum, kesika ary volotsangana. Izy ireo no ankafizin'ny literatiora tamin'ny andro taloha, ary tafiditra ao amin'ny famolavolana habakabaka ankehitriny ho famaranana. Eo anelanelan'ny fihenan-tsofina sy ny boribory, ny fahamendrehana ary ny fahatanorana dia mamorona toetr'andro atsinanana amin'ny ala sy ala ary zaridaina izany.
Ny efitrano fandraisam-peo dia misokatra sy atmosfera. Ny faritry ny ankizy dia natao hialana voly sy fampiononana ho an'ny ankizy ao an-tsaina. Ny varavarana ankavia sy ny varavarankely ankavanana dia manome hazavana mazava sy mangarahara. Ny famolavolana dia manaraka ny toe-tsaina manasongadina tsipika, ary mampiasa loko maivana maivana hametrahana ny loko fotsy. Mahafinaritra izany raha tsy very ny fahatsapana kalitao avo lenta. Ny famolavolana dia mifototra amin'ny hevitry ny tsipika, ary ny loko maivana maivana dia ampiasaina handravana ny loko hazo fotsy.
Anaran'ny tetikasa. CRC-Lingnan Mansion Marketing Center
Tetikasa ｜ Ivotoerana fivarotana
Fitaovana fanaka malefaka ｜ Millo Image
Talen'ny zavakanto: Zhang Yazhen
Toerana misy ny tetikasa ｜ Chenzhou, Hunan
Faritra tetikasa ｜ 1080㎡
Daty famitana ｜ 2020.08
Misaotra manokana an'i China Railway, Tairong Real Estate
Millo Reflections, marika hatsarana malefaka avo lenta
Millo Reflections dia marika hatsarana malefaka manome haitao avo lenta. Izy io dia mifantoka amin'ny fanomezana lalindalina, feno sy matihanina avo lenta amin'ny famolavolana fanaka malefaka sy serivisy fampiharana ho an'ny habaka toy ny trano manokana, trano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, birao fivarotana, hotely ary klioba. Hatramin'ny nananganana azy dia namorona efitrano velona tsara tarehy marobe teto amin'ny firenena izy, ary nanolo-tena ho marika voalohany amin'ny famolavolana fanaka malefaka any Shina.
Millo Image dia mandray ny "famolavolana famolavolana ny kanton'ny fiainana" ho idealy tsara tarehy, mandray ny mpanjifa ho ivon-toerana, manaja ny tena filàna sy ny fihetsem-po mety hitranga amin'ny olona sy ny ontolojia eny amin'ny habakabaka. Izahay dia manome ny habaka fifandraisana misy eo amin'ny olombelona ary mampita fomba fiaina mahafinaritra. Avelantsika hanana ny mari-pana sy ny sandany ny asa tsirairay.
Previous :: 172 Kresy Bookers Villa famandrihana, ny fandikana ny lohan'ny hazo sy fotsy | Yunxing Design Next: Ity OPEN Space ity dia manome fahafaham-po ny hevitrao rehetra. Feno "habaka miafina"